Revlon ရဲ့ Kiss Cushion Lip Tint!! | CosmeticMyanmar
Home » Article » Revlon ရဲ့ Kiss Cushion Lip Tint!!
Revlon ရဲ့ Kiss Cushion Lip Tint!!
အားလုံးပဲ သာယာတဲ့နေ့လေးပါရှင့်။ ဒီနေ့မှာတော့ Revlon ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Kiss Cushion Lip Tint လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ Korea Products နဲ့ Movies တွေဟာ အာရှ တဝန်းမှာသာမကဘဲ ကမ္ဘာတဝန်း မှာပါ လူကြိုက်များရေပန်းစားပါတယ်။ ခေတ်ရှေ့ပြေးနေတဲ့ Korea Products တွေလို Revlon ကလည်း ခေတ်နဲ့အမှီ Korea Style Cushion Lip Tint လေးကို Pretty Kiss, Pink Irl, Berry Lit, Naughty Mauve, High End Coral, Crimson Feels, Extra Violet, Wine Trip, Chocolate Pop နဲ့ Fancy Rose ဆိုပြီး အရောင် ၁၀ ရောင်ဖြင့် ဈေးကွက်ထဲကို ဖြန့်ချိထားပါတယ်။
ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ အရောင်တွေဟာ အရောင်ထွက်အားကောင်းရုံသာမက အုန်းဆီပါ ပါဝင်ထည့်သွင်းဖော်စပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် နှုတ်ခမ်းသားကို စိုပြေစေပြီး ချောမွေ့စေပါတယ်။ Cushion Tip လေးဟာလည်း နူးညံ့တဲ့အတွက်ကြောင့် သုံးစွဲသူတွေအကြိုက်တွေ့စေမှာပါ။ အရည်ရွှမ်းတဲ့ ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီး အသုံးပြုပြီးတဲ့ အခါမှာ Lip Balm ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာကြောင့် စိုရွှမ်းပြီး နှုတ်ခမ်းအလှကို ပိုမိုပေါ်လွင်စေမှာပါ။ အစားစားခြင်း၊ ရေသောက်ခြင်းကြောင့် နှုတ်ခမ်းနီ အရောင်လျော့သွားစေတာမျိုး မဖြစ်စေပါဘူး။
အသုံးပြုတဲ့အခါ Revlon အမှတ်တံဆိပ်ပါ Collar လေးကိုလှည့်ပေးခြင်းဖြင့် နှုတ်ခမ်းနီများထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထွက်လာတဲ့အခါ နှုတ်ခမ်းအတွင်းသားများကိုတို့ထိပေးပြီး လက်ချောင်းထိပ်လေးတွေကို အသုံးပြုကာ နှုတ်ခမ်းတဝိုက်ပွတ်ပေးခြင်းအားဖြင့် Korea Style နှုတ်ခမ်းလေးကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းအားဖြင့် တချောင်းကို 10$ သာကျသင့်ပြီး UK Collection Online Shop တို့ကတဆင့် မှာယူရရှိနိုင်ပါတယ်။
Image Source: www.revlon.com
Toy Story ချစ်သူတွေအတွက်နှစ်သစ်မှာ ဝယ်ထားရမယ့် Innisfree x Disney Toy Story Collections
စိုင်းစိုင်းတို့ကတော့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ၊ Mask ကပ်ရင်း သူ့သီချင်းလေးတွေနားထောင်ပါတဲ့